MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-09-08
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်သေတာကို အကြောင်းပြုပြီး ဇာတ်နာအောင် အမျိုးမျိုး ဇာတ်လမ်းထွင်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။
at 9/14/2013 10:05:00 PM2comments:
at 9/14/2013 09:45:00 PM No comments:
at 9/14/2013 09:16:00 PM No comments:
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပေမယ့် KIA က အပစ်ရပ်ရေး ဆက်ဆွေးနွေးမည်
KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေ ထပ်မံပြီး တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမယ့် အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ရေးကိစ္စတွေကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး မယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလာနန်းက မနေ့က ပြော ကြားလိုက်တယ်လို့ အေပီသတင်းမှာ ပါရှိပါတယ်။
လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ ထပ်ကျင်းပမယ်လို့ ဦးလာနန်းက ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
at 9/14/2013 09:14:00 PM No comments:
မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့်ကေ အိုင်အေ (ကချင်) လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး ဖမ်းဆီး အသတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ယနေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
at 9/14/2013 09:12:00 PM4comments:
“နိုင်ငံရေးမှာ တပ်ရဲ့ သဘောတူညီမှု မရှိဘဲနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး”
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ သို့ အသွင် ကူးပြောင်း နေ ချိန် နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များ တွင် အရေးပါသော လွှတ်တော် ခိုင်မာ အားကောင်းရေး၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ရှေ့ဆက် ကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကိစ္စ၊ သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်ကြား အာဏာလွန်ဆွဲမှု၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အလားအလာ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ အပါအ၀င် အစိုးရ အဖြေမရှာနိုင်သေးသော ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ပဋိပက္ခများ အကြောင်းတို့ကို မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သူ စာရေးဆရာ ကျော်ဝင်းကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ထက်နိုင်ဇော်က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါသည်။
at 9/14/2013 04:21:00 PM 1 comment:
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ အစိုး၇အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလုပ်အဖွဲ့ချင်း မေတွ့ဆုံခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ နှစ်ဘက်အကြားတိုက်ပွဲ ၄ ရက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးအကြား ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ နှစ်ဘက် အလုပ်အဖွဲ့ချင်းတွေ့ဆုံဖို့ ဒီလ ၁၆ ရက် ၁၇ ရက် ချိန်းဆိုထားကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့လောက်ကစပြီး ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေခြပြု ကေအိုင်အို တပ်ရင်း ၁၂ ထိန်းချုပ်ဂွင်ထဲကို အစိုး၇တပ်တွေ ၀င်ရောက်ရာက တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတာလို့ စစ်သတင်းရပ်ကွက်တွေက ဆိုပါတယ်။
at 9/14/2013 08:36:00 AM2comments:
သမီးသေလို့ အကူညီတောင်းသူ အပြစ်ရှိတယ်လို့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်
သမီးငယ် ကျည်ဆံထိမှန်သေဆုံးတဲ့ကိစ္စကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ အကူညီတောင်းတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ဒေသခံ ဦးဘရန်ရှောင်ကို ဖားကန့်တရားရုံးက အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဦးဘရန်ရှောင်ရဲ့ ကိုးတန်းကျောင်းသူ သမီးငယ် မဂျာဆိုင်းအိမ်ဟာ မနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း ပစ်ခတ်မှုတခုမှာ ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တာ ဒီကေန့ဆို တနှစ်တင်းတင်းပြည့်ပါပြီ။
at 9/14/2013 08:34:00 AM No comments:
ဒီရက်ပိုင်းတွေ အတွင်း ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ သေနတ် သံတွေ ပြန်ညံလာ ခဲ့ပါတယ်။
တဘက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ဆွေးနွေး နေကြပေမယ့် ဘာကြောင့် အခုလို တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ် နေတာပါလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေအိုင်အိုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဒေါင်ခါးကို ဆက်သွယ်မေးကြည့်တော့ တပ်တည်ရှိမှု အနေအထား တွေက နီးကပ်နေတဲ့ အတွက် အစိုးရဘက်က လှုပ်ရှားသွားလာမှုနဲ့ ကေအိုင်အေဘက်က လှုပ်ရှားမှုတွေ ပက်ပင်း တိုးတက် တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ကြောင်း၊ တခါတလေ နယ်မြေ ကျော်လာတာမျိုး တွေလည်း ရှိတတ်လို့ အခုလို တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
at 9/14/2013 08:26:00 AM 1 comment:
CPI ကုမ္ပဏီ၏ ချီဖွေငယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ယခုနှစ်မကုန်မီ ဓာတ်အား စတင်ရောင်းချမည်
CPI ကုမ္ပဏီ၏ ချီဖွေငယ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ကချင်ပြည်နယ်သို့ ယခုနှစ် မကုန်မီ စတင်ရောင်းချမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ချီဖွေငယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် ၃၃ ဒသမ ၃ မီဂါဝပ် စက်သုံးလုံး တပ်ဆင်ထားပြီး မီဂါဝပ် ၉၉ ဒသမ ၉ မီဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ကာ ပထမတစ်လုံးကို အောက်တိုဘာလ မကုန်မီ စတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 9/14/2013 08:14:00 AM No comments:
ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း KIA နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်တွေ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာ နေပါတယ်။ TNLA တပ်ကိုလည်း အင်အားတွေ သုံးပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကနေ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်န၀ါရီလတွေမှာ KIA နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်တို့ အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကချင် Website တော်တော် များများလည်း DDOS နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရလို့ သတင်းတွေ ပြတ်တောက် ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြား နိုင်ငံခြား အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေရဲ့ သတင်းတွေ တင်ဆက်ပေးမှုကြောင့် သတင်းတွေကို အမှန်အတိုင်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က လိုလားပုံ မရခဲ့ပါဘူး။
အထူးသဖြင့် Myanmar Express ကနေ သတင်း မီဒီယာတွေ အားလုံးနီးပါးကို အပုပ်ချရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ DDOS နဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ LINK တွေ တင်ခဲ့တဲ့ အထိပါပဲ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာလည်း KIA နဲ့ ELEVEN MEDIA GROUP ကို အကြီး အကျယ် တိုက်ခိုက်နေတာ တွေ့ရမှာပါ ....
at 9/13/2013 11:31:00 PM 1 comment:
အစိုးရ နှင့် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) တို့အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး ဆွေးနွေး လျက်ရှိ သော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကေအိုင်အေနှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေပြီး မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်ဗိုလ် အရာရှိ တဦး ကျဆုံးသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း တိုက်ပွဲ များ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နှင့် ၂၉ ရက်နေ့ ပူတာအို ခရိုင်တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မန်စီ မြို့နယ်တွင်မူ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲ တွင် မြန်မာစစ်တပ် မှ စစ်ဗိုလ်အရာရှိ တဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
at 9/13/2013 10:01:00 PM5comments:
at 9/13/2013 09:54:00 PM No comments:
မြစ်ကြီးနား မိဘမဲ့ဂေဟာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတွက် အိမ်ရှင်ဦးဒယောင်တန်ဂွန်းကို ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်ချမှတ်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မိဘမဲ့ ဂေဟာတစ်ခုတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြင့် လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးမှုအတွက် ဖမ်းဆီးခံ ထားရသူ အိမ်ရှင်ဦးဒယောင်တန်ဂွန်းအား ပေါက်ကွဲစေမှုဖြင့် ခရိုင်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီး အမှုတွဲဖြစ်သူ ငါးဦးကို ထောင်ဒဏ်ခြောက်လစီ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်က ချမှတ်လိုက်သည်ဟု ဦးဒယောင်တန်ဂွန်း၏ သမီးဒေါ်ခေါန်ဂျာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
at 9/13/2013 05:45:00 PM No comments:
at 9/13/2013 05:40:00 PM No comments:
at 9/13/2013 03:07:00 PM 1 comment:
“ဆီးဂိမ်းနဲ့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနီးလာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဖြစ်သဘောနဲ့ လုပ်ချင်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်”
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်(KBC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
"မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးမှာ တိုင်းရင်းသားအရေးမပါဘဲ မပြီးနိုင်ဘူး။ အခုလက်နက်စွဲကိုင်နေတာ။ အားလုံးတိုင်းရင်းသားတွေပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေက မရှိတာကို တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ ရှိပြီးသားကိုတောင်းတာ။ စိတ်သဘောထားကြီးစွာ လိုက်လျောလိုက်ရင် ပြေလည်သွားနိုင်တယ်။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း တိုင်းရင်းသားတွေကို ဟိုတစ်ဖွဲ့၊ ဒီတစ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘဲ စုံစုံညီညီတွေ့ဆုံပြီးမှ မင်းတို့လိုချင်တာ ဒါပဲဆိုရင် ပြီးသွားမှာ။ အခုက ကချင်ဝန်ကြီးချုပ်က ကချင်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ မဲပေးထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းနေတဲ့ မူလအခွင့်အရေးတွေပေးရင် ရိုးရိုးသားသားဉာဏ်နီဉာဏ်နက်မပါဘဲ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ Power Sharing လုပ်လိုက်ရင် ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒီလိုပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်" Rev Samson.
at 9/13/2013 08:49:00 AM 1 comment:
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မံစီဒေသတွင် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့ သုံးရက်ဆက် တိုက်ပွဲဖြစ်
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မံစီမြို့နယ် ကောင်လွင်ကျေးရွာနှင့် နန်လင်းပါကျေးရွာ ၀န်းကျင်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှ စတင်ပြီး တပ်မတော်နှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (KIA) တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကေအိုင်အို ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ''ဒီမနက်လည်း ၅ နာရီလောက်မှာ မုန်ကျိန်ပါ ရွာအနီးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၀န်းကျင်လောက်က ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၃) ရင်း (၁၂) ရဲ့ တပ်ရင်းတောင်ကုန်းကို တပ်မတော်က ၀င်သိမ်းလိုက်တော့ တပ်ရင်းက နောက်ဆုတ်ရသွားတယ်။ အခု တိုက်ပွဲဖြစ်တာက တပ်ဆုတ်ထားတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ။ ဆုတ်ထားတဲ့ နယ်မြေထဲကို ၀င်လာတော့ တပ်မတော်က နယ်ကျွံတဲ့ သဘောပေါ့။ ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ သဘောပေါ့'' ဟု စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြောကြားသည်။
at 9/13/2013 08:41:00 AM 1 comment:
at 9/12/2013 06:39:00 PM No comments:
at 9/12/2013 06:32:00 PM3comments:
TNLA ကို အစိုးရတပ်များ ထိုးစစ်ဆင်၊ အစိုးရတပ်ဘက်က အကျအဆုံးများ
တနာရီခွဲခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သည့် တိုက်ပွဲကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော် ခလရ ၄၅ တပ်ရင်းနှင့် ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်မှ ဆယ့် ၁၂ ဦး ကျဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ များပြားကြောင်း ပလောင် (တအာင်း) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး တားဘုန်းကျော်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
at 9/12/2013 06:18:00 PM No comments:
at 9/12/2013 12:26:00 PM No comments:
ထိုင်းအကျဉ်းထောင်မှသည် အမေရိကန်စစ်သားတစ်ဦးအဖြစ်သို့ ................ (ကချင်ယောကျာင်္းဘယ်တော့မှ ကချင်မြေကို မမေ့ဘူး)
(the myanmar times, sept 9-15..ကို ဘာသာပြန်သည်)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၀၆ လဖိုင်ဆင်ဝါးနော် ရှေ့ ရေးမသေချာမှုများစွာနဲ့ အိမ်က ထွက်ခဲ့
တယ်၊၊ သူ့မိဘတွေ မြောက်ဒဂုံမှာ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရေးယူခံရတာနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ရဲစခန်းမှူးနဲ့ အငြင်းအခုံဖြစ်ပြီး ၃ ရက်မြောက်မှာ ထွက်လာခဲ့ရတာပါ၊၊
သူထွက်သာလာရတာ ကျွမ်းကျင်အလုပ်မရှိသလို၊ ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမ၀င် ခိုးဝင်
at 9/12/2013 10:22:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင်အခြေစိုက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၃) ဒေသရှိ မုန်းဒိန်ပါ၊ မုန်းခေါင်နေရာတွင် ယနေ့နံနက် အစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် KIA တပ်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဗန်းမော်ဖက်မှလှုပ်ရှားလာသော အစိုးရတပ်များသည် KIA တပ်ရင်း ၂၇ နှင့် တပ်ရင်း ၁၂ ရှိရာဖက်သို့ လှုပ်ရှားလာသောကြောင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIA ဖက်မှအတည်ပြုသည်။
at 9/12/2013 10:02:00 AM No comments:
ဒီပုံကတော့ ဒီရက် အတွင်း ဗမာတပ်မ ၆၆ က ကေ အိုင်အေ တပ်မဟာ (၁) ဌာနချုပ် (ပူတာအို) ဖက် ထိုးစစ်ဆင် တုန်းက ကျဆုံး သွားတဲ့ ရ၀မ်လို့ ယူဆရတဲ့ တိုင်းရင်း သား ပြည်သူ့ စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါ။
တချို့က ကေ အိုင်အေ ဟာ ဒီလို ဓါတ် ပုံတွေ နဲ့ ၀ါဒ ဖြန့်တယ် ဆိုပြီး ပြော တယ်။ တကယ်တော့ ကေအိုင်အေ စစ်တပ်မှာ စစ်သား တိုင်းက ဖုန်းကိုင်တယ်၊ ဘယ် သူ ရိုက်တင် လိုက်မှန်းတောင် မသိ လိုက်ပဲ ဒီလို ပုံ တွေ ထွက် လာတာ ဖြစ်တယ်။ ကေအိုင်အေ စစ်တပ် မှာ သတင်းလွတ် လပ်ခွင့်ရှိလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ “ဒီလို လုပ်ရမယ်၊ မလုပ်ရဘူး” လို့ ကန့်သတ် ထားတာ မရှိဘူး။ ဒီတော့ ၀ါဒဖြန့်ဖို့ ၀ါဒလဲ မရှိ သလို၊ ပြင်ဆင် ထားတာလဲ မရှိတာ အမှန်ဖြစ်တယ်။
at 9/12/2013 08:59:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအုိုင်အုိုအစုိုးရ မြောက်ပုိုင်းတုိုင်း ကေအုိုအေ တပ်မဟာ (၁) လက်အောက် ကေအုိုအေ တပ်ရင်း (၇) ဒေသဖြစ်သော ပူတာအုိုခရုိုင် အင်ခဂါးကျေးရွာအထက်တွင် အခြေစုိုက်တပ်စွဲထားသော ကေအုိုင်အေ အမှတ် (၂) ပြည်သူ့စစ်တပ်ရင်မှ ဗုိုလ်ကြီး ပခေါင်တန်ခမ့် ဦးဆောင်သော ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးနှင့် ဗမာအစုိုးရစစ်တပ် ခလရ (၁၃၇) တပ်ဖွဲ့နှင့် တန်ဂူးတန်တပ်ဖွဲ့များပူပေါင်းပါဝင်သော အင်အား (၂၀၀) ခန့်တုို့သည် စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် တုိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်များသည် ကေအုိုင်အေများ တပ်စွဲထားသော အင်ခဂါး ဘက်သုို့ ထုိုးစစ်ဆင် ရောက်ရှိလာသောကြောင့် ယခုလုိုတုိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တုိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစုိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ ဗုိုလ်ကြီးဇော်မျိုးဆက် နှင့် တပ်သား (၃) သေဆုံးကြောင်းနှင့် ကေအုိုင်အေဘက်မှလည်း တပ်သား တစ်ဦး ကျဆုံး သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 9/12/2013 08:55:00 AM No comments:
လာမယ့် သီတင်း ပတ်ထဲ မှာ ကေအိုင်အို ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲတွေ အောင်မြင် မယ်ဆိုရင် လာမယ့်အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းမှာ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံး တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ဖြစ် နိုင်ကြောင်း မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။
at 9/12/2013 08:50:00 AM No comments:
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်ရာ ဗန်းမော် ခရိုင် မံစီ မြို့နယ်ရှိ လောင်ဗျန်နှင့် နမ့်ဖန်ခါ ၌ အစိုးရ တပ်များက စစ်ဆင်လျှက် ရှိရာ KIA တပ်မဟာ (၃) တပ်ရင်း ၁၂တပ်ဖွဲ့နှင့် နှစ်ရက် ဆက်တိုက် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း KIO ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘိုက ဆိုပါသည်။
“မနေ့ကတည်းက အဲဒီ တပ်မဟာ (၃) ဒေသ ဘက်မှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတယ်၊ ဒီနေ့လည်း ဆက်ဖြစ် နေတယ်၊ တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ် ကိုတော့ အစီရင် ခံစာ ရောက်ပြီးမှ ပဲ ပြောနိုင်မယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
at 9/11/2013 08:59:00 PM No comments:
at 9/11/2013 07:36:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinpraw Ginwang Dap Ba (3) n pu, KIA Dung (12) ginra rai Mung Ding, Mung Hkawng ginra ni hta KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni dai hpawt September (11) ya jahpawt hkying (8:00 AM) ten kawn ya shiga ka nga ai ten du hkra laja lana gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen ni hpyen n gun kaba hte htu gasat nga ai re lam sha n-ga, Kai Htik Bum ntsa ka wna laknak kaba ni hte gap garum ya nga ai lam mung na chye lu ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya maga na KIA Dung (12) hte Dung (27) ni jawm nna ninghkap gasat nga ai lam, KIA Dung (1) ni n lu sa garum na matu Kai Htik Bum kawn laknak kaba ni hte gap garum ya nga ai re lam hpe mung na chye lu ai.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinpraw Ginwang Dap Ba (3) n pu, KIA Dung (12) ginra rai nga ai Zau Bung makau, Kawng Ja the Nam Lim Pa hta KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni September (10) ya jahpawt kaw nna laja lana gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Maji Gung de na yu hkrat wa ai myen hpyen hpung (mying n chye lu) ni hte KIA Dung (12) na myu tsaw share ninghkring ni jahpawt hkying (11:00 AM) ten kawn shana maga hkying (4:00 PM) ten ram du hkra Magyeng Kahtawng kaw gap gasat lai wa ai re lam na chye lu ai. Ndai zawn gasat ai hta myen hpyen ni kawn shana maga hkying (4:00 PM) du hkra sinat kaba ni naw gap sharu bun nga ai lam hpe mung na chye lu ai. Ndai gasat poi hta myen maga na hpyen du langai het hpyen ma (5) hkrat ai lam, tinang KIA myu tsaw share ninghkring ni maga na gaw hpa n ra ai lam na chye lu ai.
at 9/11/2013 07:34:00 PM No comments:
အစိုးရ၏ တပြည်လုံး အပစ်ရပ်ရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲသို့ KIA တက်ရောက်မည် မဟုတ်
အစိုးရ၏ တနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးပွဲသို့ တက်ရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကချင်ပြည် လွတ်လပ် ရေး အဖွဲ့ KIO ၏ သဘောထားကို မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး မကဒတ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော် သံခဲနှင့် ယမာန်နေ့က လိုင်ဇာ မြို့၌ တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် က ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု ABSDF (မြောက် ပိုင်း) အဖွဲ့၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးမင်းဌေးက ဆိုပါသည်။
“ ကျနော်တို့ ဥက္ကဌက ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်နဲ့ လိုင်ဇာ ဌာနချုပ်မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြား လိုက်တာပါ။ ကျနော်တို့ ABSDF အဖွဲ့ကတော့ တနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဖြစ်မြောက်ဖို့ရယ်၊ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ဖို့ကြိုးစား နေပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
at 9/11/2013 07:29:00 PM No comments:
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် နမ်းဖက်ကာ အုပ်စုရှိ ဖာဖိုင့်နှင့် ပါချောင် ကျေးရွာ နမ့်ဟွန်းချောင်း အနီးသို့ ထိုးစစ်ဆင် လာသော အစိုး ရ ခလရ (၄၅) တပ်ဖွဲ့နှင့် ပန်ဆေး ပြည်သူ့စစ် ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့ကို တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး TNLA တပ်ရင်း (၁၁၂) မှ စောင့်ပစ်ရာ ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်မှ ၃ နာရီခွဲ အထိ ပြင်းထန်စွာ အနီးကပ် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ဟု TNLA အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး တာဘုန်းကျော်က ဆိုပါသည်။
“ ဒီလိုပါ၊ ဒီတပ်က မနေ့ ကတည်းက ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ နောက်ကို လိုက်နေတာ။ ဒီတော့ သူတို့ချောင်းကူးလာတယ် ။ ချောင်းတဘက် ကမ်းမှာလည်း ကျနော်တို့ မိုင်းထောင်ထားတယ်။ ရှေ့ဆုံးပွိုင့်က မိုင်းထိတာနဲ့ ကျန်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ တချို့က ချောင်းထဲမှာလေ ၊ ဒီတော့ အပြင်းအထန်ကို ကျနော်တို့ တိုက်လိုက် ပါတယ်” ဟုဆိုပါသည်။
at 9/11/2013 07:27:00 PM No comments:
မြစ်ကြီး နားမြို့ အထက (၁) တွင် ပညာ သင်ကြားနေသော အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် နဝမ တန်း ကျောင်း သား မောင်မရန်ဒွဲလာကို ညပိုင်း တာဝန်ကျ ကင်းလှည့်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် ကာ ဦးခေါင်း ခွံရိုး ချိုင့်ဝင်သွား သည်အထိ ရိုက်နှက် စစ်ဆေးခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အရေးယူပေးရန် ကချင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ တိုင်ကြားထားကြောင်း ကာယကံရှင် မောင်မရန်ဒွဲလာ၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုမရန်ထွယ်အောင်က The Voice သို့ ပြောသည်။
at 9/11/2013 03:57:00 PM No comments:
ယခုအခါ တပြည်လုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုသည်မှာလည်း မရေရာမသေချာ သလို၊ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆို သည်မှာလည်း “အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှု” များနှင့် ဇာတ်မျောနေပေသည်။
“အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှု”ဆိုသည်မှာ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်ဘယ်လိုအချက်တွေ အပေးအယူလုပ်ကြမည်၊ ဘယ်လိုကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးကြမည်ဆိုသည့်ကိစ္စများကို အပြန်အလှန်တီးခေါက်ကြသည့် သဘောမျှသာ ဖြစ်သည်။
at 9/11/2013 03:52:00 PM No comments:
at 9/11/2013 02:58:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတို့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအရ တူတာတွေ တွဲလုပ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံ လာကြလို့ နိုင်ငံ တကာကပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ပြောနေကြတယ်။
တချိန်ကတော့ စစ်အစိုးရ လူကြီးတွေနဲ့ သတင်းစာတွေက အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုတာ မစဉ်းစားခဲ့ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင် နာမည်ရှေ့က အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ဖြုတ်ပြီး ဒေါ်စုကြည် လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ရေးကြတယ်။
at 9/11/2013 01:15:00 PM 1 comment:
at 9/11/2013 01:00:00 PM No comments:
at 9/11/2013 09:29:00 AM No comments:
UNFC နှင့်ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကုိုယ်စားလှယ်များ၏ ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ ထုတ်ပြန်ချက်
at 9/11/2013 09:22:00 AM No comments:
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်ရေး စာချုပ်အတွက် နိုင်ငံရေးအာမခံချက် မရှိသေးဟု UNFC ပြောကြားပြီးချိန်တွင် တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ (WGEC) က အစိုးရနှင့် အဆင်ပြေရန် ကြိုးစားနေဟုဆို
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်ရေး စာချုပ်အတွက် နိုင်ငံရေးအာမခံချက် မရှိသေးဟု ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)က ပြောကြားပြီးချိန်တွင် တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (WGEC) က အစိုးရနှင့် အဆင်ပြေရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ကတော့ အစိုးရနဲ့ ပြေလည်အောင် ကြိုးစားနေတာပဲ။ ညှိနှိုင်းပွဲတွေလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ပြီးပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က WGEC ရဲ့ မူဘောင်တွေကို တင်ပြထားတယ်။ အစိုးရဘက်တော့ အဲဒီမူဘောင်တွေကို ငြင်းခုံစရာ သိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပေါ့။ အသေးစိတ် ကိစ္စတွေကိုတော့ ညှိနှိုင်းနေတယ်" ဟု WGEC အဖွဲ့ဝင် RCSS/SSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလှက The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
at 9/11/2013 09:21:00 AM No comments:
မြစ်ကြီးနားရဲရိုက်လို့ ကိုးတန်းကျောင်းသား ခေါင်းဒဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တို့၏ လက်ချက်ကြောင့် ကိုးတန်းကျောင်း သား တဦးကို ဦးခေါင်း ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရရှိနေကြောင်း ကာယ ကံရှင်နှင့် သူ၏ မိသားစု က ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၄ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနား အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့က ဖမ်းသွားပြီး ထိုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့ အဆောင်ကနေ ခိုးထွက်လာတယ်။
ပြီးတော့ လမ်းဘေးမှာ ခဏထိုင်နေချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို တားပြီး စကားပြောဖို့ လုပ်တော့ အရပ်ဝတ်ရဲသားက ကျနော်တို့ကို လိုက်ဖမ်းတယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေက ထွက်ပြေးသွားနိုင်တယ်။ ကျနော်ပဲကျန်ခဲ့တော့ ကျနော်ကိုပဲ ဖမ်းသွားပြီး ရိုက်နှက် စစ်ဆေးပါတယ်” ဟု ကိုးတန်းကျောင်းသား မောင်မရန်ဒွဲလာက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
at 9/10/2013 07:03:00 PM No comments:
Hkala Hkrum Ai MKM Magam Gun Brang Shawng Hpe Myen Asuya Hpyen Dap ni Zingri Sat
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap Masat (36) Dap Dung makawp maga ginra, Sam Mung, Loi Dang mare kaw 2013 September3ya shani 1:00 hte 2:00 lapran Myen Asuya Hpyen Dap hte gasat poi byin wa sai hta hkala hkrum ai masha hpe Myen Asuya Hpyen Dap ni zingri sat da ai mabyin byin wa sai lam chye lu ai.
Ndai gasat poi hta Myen Asuya Hpyen Dap ni hkap gap ai majaw MKM magam gun rai nga ai Brang Shawng hkala hkrum ai hpe rim la nna zingri sat kau ya ai re hpe chye lu ai.
at 9/10/2013 07:00:00 PM No comments:
Mung masa lam hte seng nna ya ten federal democracy law, self-determination law ngu nna tsun kamang nga ai. Ndai mung masa lam hta Kachin ni gaw mung masa ahkaw ahkang kade ram gam la lu na kun? jawm dinglik maram la lu na matu tang madun dat ai. Myen niademocracy lai masa gaw mung masa hpung hpaw na me (vote) shang shing jawng ra na, dang la ai ni chyu sha asuya galaw mungdan uphkang ra na, mungdanaripkawp tara hpe asuya sha masat daw dan galaw na, amyu bawsang niaahkaw ahkang ma hkra hpe paliman hta bawngban nna me (vote) bang nna daw dan la ra na ngu ai rai nga malu ai. Mung masa ahkaw ahkang yawng hkra hpe me jaw nna sha dawdan la mat wa na hkrang rai nga ai.
at 9/10/2013 06:59:00 PM No comments:
at 9/10/2013 06:50:00 PM No comments:
ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး အထိမ်းအမှတ်အနေ နဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဓမ္မရက္ခိတ ဝန်းသိုကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီး ဦသီလဝံသနဲ့ သံဃာတော်အပါး ၇ဝ ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက မနေ့က နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ်။
ဝန်းသိုဆရာတော်ကြီးက လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ခင်စွာအတူတကွနေထိုင်ကြဖို့ မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ ဆွမ်းကပ်လှူရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့မဗဟိုဗလီ ဥက္ကဋ္ဌ ဟာဂျီ ဦးမင်းလွင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
at 9/10/2013 08:46:00 AM No comments:
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ လိုင်ဇာဒေသကို စတင်ရောက်ရှိ
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေဟာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ရုံးစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ဆေးဝါးတွေကို အခုလ ၇ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး သွားရောက်ပေးပို့နေပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရနဲ့ KIO တပ်တွေ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ခွဲကာလအတွင်း အခုလိုသွားရောက်ကူညီတာဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအေးဝင်းက RFA ကို ဒီကနေ့ လိုက်ပြောပါတယ်။
at 9/10/2013 08:45:00 AM No comments:
at 9/10/2013 08:43:00 AM No comments:
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် ကမ်းလှမ်းချက်ကို နိုင်ငံရေး အာမခံချက် မရှိသဖြင့် သဘောထားမပေးနိုင်ကြောင်း အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် UNFC ပြောကြား
အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) တို့ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
at 9/10/2013 08:41:00 AM No comments:
အစိုးရက ယခုနှစ် အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းတွင် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့နှင့် ပေါင်းစည်းထားသည့် ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ကို စည်းရုံးခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှုရမသွားခဲ့ပေ။
UNFC နှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ(UPWC) တို့ ဒုတိယ အကြိမ် အကြိုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့က စည်းရုံးခဲ့ရာမှာ UNFC ခေါင်းဆောင်များက သဘောတူညီချက် မပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 9/09/2013 07:05:00 PM No comments:
ကုလအကူညီပေးရေးအဖွဲ့များ ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း ကား ၁၁ စီး ဖြင့် လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိနေ
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီပေး အဖွဲ့များသည် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့နှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ခိုလှုံနေသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ အတွက် အကူညီပေးရေး ပစ္စည်း ကုန်တင်ကားကြီး (၁၁)ဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ရောက်ရှိလာကာ အသီးသီးဖြန့်ဝေပေးနေကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ကုလအကူညီပေးရေးအဖွဲ့များသည် လိုင်ဇာသို့ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ နှင့်အတူ နိုင်ငံတကာ INGO အဖွဲ့အစည်း များ၏ ထောက်ပံ့မှု အကူအညီများလည်းပါဝင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ OCHA မှ Helena Mazarro က ပြောဆိုသည်။
at 9/09/2013 07:04:00 PM No comments:
at 9/09/2013 07:02:00 PM No comments:
အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမှု မပြေလည် ပါက WGEC သည်လည်း လက်မှတ် ထိုးရန် မရှိ
တိုင်းရင်းသားများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ WGEC ( Working Group for Ethnic Co-ordinating)မှ နည်းပညာရှင် အဖွဲ့သည် လာမည့် စက်တင်ဘာ (၁၁) ရက်နေ့တွင် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဗဟို အဖွဲ့ (MPC) နှင့် မူဘောင် ညှိနှိုင်းရန် ရှိသည်ဟု ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကော်စီ (RCSS)မှ ဒုတိယ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ကြီး စိုင်းမိဏ်းက ဆိုပါသည်။
“ အစိုးရက တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးပွဲ အတွက် တောင်းဆိုနေတယ် မဟုတ်လား၊ ကျနော်တို့ကလည်း အခု သွားမဲ့ ခရီး စဉ်မှာ သူတို့နဲ့ မူဘောင် သွားညှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့လည်း လက်မှတ် မထိုးဘူး” ဟုဆိုပါသည်။
WGEC ၏ နည်းပညာရှင် အဖွဲ့ ဖြစ်သော RCSS နှင့် KNU တို့သည် ၄င်းတို့ ချမှတ် ထားသော မူဘောင် (၆) ချက်ကို အစိုးရ MPC အဖွဲ့ထံ အသေးစိတ် ညှိနှိုင်းရန် ရှိပါသည်။ ယင်းညှိနှိုင်း အဖွဲ့တွင် KNU ဖက်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ပဒိုကွယ်ထူးဝင်း၊ RCSS မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ငိဏ်းနှင့် ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောဝ်ဆိုင်တို့ ပါဝင်သည်။
၄င်းတို့ တင်ပြ လိုသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် များသည် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ၏ မူဘောင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်ထု အပါအဝင် Civil Societies တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြီး “နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုင်ရာမူဘောင်” (Framework for Political Dialogue) တွင် ပါဝင်မည့် အချက်အလက် များကို သဘောတူ ချမှတ်ရန်။
၂။(က) ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း များ၏ စုစည်း ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များ အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး၍ “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုင်ရာ မူဘောင် သဘောထား” (The Framework of Political Dialogue) သဘော တူညီချက် ရရှိရန်။
(ခ) ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ဘက်နှစ်ဘက်မှ လက်ခံနိုင်သော နေရာတွင် ဆွေးနွေးရန်။
(ဂ) ထို့ပြင် ထိုသို့ ဆွေးနွေးစဉ်နှင့် သဘော တူညီချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ဘက်မလိုက်သော နိုင်ငံ တကာ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ထားရှိရန်နှင့် သဘော တူညီချက် များကို အများပြည်သူ သိရှိအောင် ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ရန်။
၃။ အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ “တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောထား” (The Framework of Political Dialogue) သဘော တူညီချက် ရရှိပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက် သော်လည်းကောင်း၊ လူမျိုး အလိုက် သော်လည်းကောင်း တိုင်း ရင်းသားတို့၏ ညီလာခံများ ကျင်းပပြီး ရှင်းလင်း ညှိနှိုင်း သဘောထား ရယူသွားရန်။
၄။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ် အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် Civil Societies အဖွဲ့ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အသိပညာရှင်၊ အတတ် ပညာရှင်များ ပါဝင်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံ ညီလာခံ တခုကို ခေါ်ယူ ကျင်းပ သွားရန်။
၅။ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒီမိုကရေစီနည်း အရ လှုပ်ရှားနေကြသော နိုင်ငံရေး အင်အား စုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ အချိုးညီ ပါဝင်ပြီး အင်အားစု သုံးစု စလုံး လက်ခံနိုင်သော ပုံစံဖြင့် ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု ညီလာခံကြီး တရပ် ကျင်းပသွားရန်။ ထိုညီလာခံ ကြီးမှ ချမှတ်သော သဘော တူညီချက်များကို “တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု သဘောတူညီချက်” (Union Accord) အဖြစ် သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးရန်။
၆။ “တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု သဘောတူညီချက်” (Union Accord) ကိုအချိန် အတိ အကျ သတ်မှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန်။
ဤမူဘောင်ကို MPC အား တင်ပြဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းခြင်း အဆင်မပြေပါက အစိုးရ တောင်းဆိုသော တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ဆောင်သော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးပွဲကိုလည်း တက်ရောက်တော့မည် မဟုတ်ဟု ဗိုလ်ကြီး စိုင်းမိဏ်းက ဆိုပါသည်။
အလားတူ ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီ ကမူ အစိုးရ၏ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ဆောင်သော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲကို တက်ရောက်ရန် အစီစဉ်မရှိဟု ပြင်ပ ဆက်ဆံရေး ဒုတိယ တာဝန်ခံ ဦးဆမ်ခွန်က ဆိုပါ သည်။
UNFC သည်လည်း တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ ဆောင်သော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုးပွဲကို တက်ရောက်ရန် အစိုးရ အဖွဲ့၏ ဖိအားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်ဟု အတွင်းရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ပဒိုမန်းမန်းက ဆိုပါသည်။
RCSS နှင့် KNU တို့၏ WGEC နည်းပညာရှင် အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၂၃) ရက်နေ့၌ အစိုးရ MPC နှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး သြဂုတ် (၃၁) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
at 9/09/2013 07:01:00 PM No comments:
ယခုတစ်လော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဝေဖန်ထင်မြင်ချက်များ ကြားနေရသည်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ကိစ္စဖြစ်သဖြင့် အများက စိတ်ဝင်စားနေကြသည့် ကိစ္စမှာ ကိစ္စကောင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအပေါ်မူတည်ပြီး နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအရေးကိစ္စများသည်
at 9/09/2013 11:11:00 AM No comments:
at 9/09/2013 08:44:00 AM No comments:
တဖက်သတ် ဖြစ်လာနေသော UNFC နှင့် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့၏ အကြို ညှိနှိုင်းပွဲ
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC ) သည်၊ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ ဒုက္ကဌ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း တို့နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အကြို ညှိနှိုင်းပွဲ အတွက် ယနေ့ နံက် (၉) နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဇင်းမယ်မြို့ ၌ တနေ့တာ ကျင်းပ ပြီးစီး ခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် ခဲ့သော UNFC အတွင်းရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ပဒို မန်းမန်းက ဆိုပါသည်။
“ ကျနော်တို့ ဖက်က ကျနော်တို့ မူဘောင်ကို တင်ပြတယ်။ သူတို့ဖက်က သူတို့ လမ်းပြမူကို တင်ပြ ပါတယ်။ အပြန်အလှန် ရှင်းပြ ကြပြီးတော့ နှစ်ဖက် စလုံးက အထက်ကို တင်ပြပြီးတော့ နောက်ထပ် တွေ့ဆုံဖို့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
at 9/08/2013 09:36:00 PM No comments:
(ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၂၇)
ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ် (၁)
အောင်ဒင် ။ စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်ဖျား၊ ကချင်ပြည်နယ်ကဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ မူလအစမှာ မြစ်ဆုံဆည်ကြီး တည်ဆောက် မှာကို မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးက အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ အသက်သွေးကြောကြီးပါ၊ တရုတ်ပြည်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများ ဆောက်လုပ်နေကြတဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ကြီးမားလှတဲ့ ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့
ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ၊ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်လုပ်ရေးကို ကန့်ကွက်မှုက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အင်မတန်မှ အားကောင်း၊ ခိုင်မာ၊ ပြင်းထန်လှတာမို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို သူ့ရဲ့ သမ္မတ သက်တမ်းအတွင်းမှာ ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်၊
at 9/08/2013 09:34:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့တုိုင်းရင်းသား UNFC အဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဌ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ညီညွတ်သော တုိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့က ဦးနိုင်ဟံသာ ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ဟာ ဒီကနေ့ မနက် ၉ နာရီက ထိုင်းနုိုင်ငံ ချင်းမုိုင်မြို့က Holiday Inn Hotel မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် နဲ့ နုိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ မူဘောင် ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
at 9/08/2013 09:30:00 PM No comments: